Ady amin’ny tsi-fisaziana, nanapa-kevitra hanohana ny fiverenan’ilay mpikamban’ny vaomiera miady amin’ny kolikoly ny fitsarana ambony ao Goatemala · Global Voices teny Malagasy
President's failure to comply could lead to removal from office
Voadika ny 19 Septambra 2018 6:39 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Ελληνικά, Italiano, English
Lapan'ny Fitsarana ara-Dalàmpanorenan'i Goatemala. Sary: Nómada GT, navoaka teo ambanin'ny lisansa Creative Commons (CC BY-NC-ND).
Ho zava-dehibe ho an'ny demokrasia Goatemalana ny 48 ora manaraka. Tamin'ny fanapahan-kevitra niarahana nanapaka, nandidy ny governemanta ny Fitsarana ara-Dalàmpanorenan'i Goatemala mba hamela ilay Kolombiana mpahay lalàna Ivan Velasquez hiverina any amin'ny firenena ary hanohy ny asany amin'ny maha-filohan'ny Vaomiera Iraisampirenena miady amin'ny tsi-fisaziana tohanan'ny Firenena Mikambana (CICIG amin'ny teny Espaniola) azy.
Tamin'ny volana lasa teo, nanambara ny filoha Jimmy Morales fa tsy hanavao ny fe-potoam-piasan'ny CICIG ankoatra ny fanakanana ny fiverenan'i Velasquez, izay mipetraka any Etazonia ankehitriny. Nahatonga hatezerana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy tao amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra, ka nahatonga hetsi-panoherana sy fanamelohana avy amin'ireo mpiaro ny zon'olombelona. Izao fanapahan-kevitry ny filoha izao no nanaraka ny fiampangan'ny vaomiera fisiana kolikoly, indrindra ny famatsiam-bola tsy ara-dalàna fanentanana itoriana an'i Morales tenany, sy itoriana ireo ao amin'ny fianakaviany izay miatrika fitsarana noho ny fanaovana hosoka eo anoloan'ny Fitsarana ara-dalàmpanorenana.
Tsy itsapana ireo andrim-panjakana Demaokratika ao Goatemalà ihany ny roa andro manaraka, fa ho an'ireo sehatra izay efa nanohana taloha ny filoha. Araka ny antontan-taratasy ofisialin'ny fitsarana, ny tsy fankatoavana ny baikon'ny Fitsarana dia mety midika fanesorana ny filoha amin'ny alàlan'ny rafi-dalàmpanorenana.
Manara-maso akaiky sy mandinika ireo toe-javatra samihafa miseho ireo mpanao gazety toa an'i Nina Lakhani sy ireo mpaneho hevitra hafa ao amin'ny media sosialy, indrindra raha mandà ny hanaja ny didim-pitsarana i Morales ary misarika fanohanana avy amin'ny tafika Goatemalteka:
Goatemala: farany ny didim-pitsaran'ny fitsarana momba ny lalampanorenana. Tsy misy fomba ara-dalàna/ara-dalàmpanorenana tsy hiraharahiana na hamadihana ny didim-pitsarana androany alina izay manohana ny @CICIGgt manoloana ny filoha @jimmymoralesgt. Inona no ho ataony sy ny tambajotran'ny sangany mpiara-dia azy? Hankatòa ny lalàm-panorenana sa hiady = fanonganam-panjakana
Naneho hevitra tamim-pitoniana sy fahafaham-po ireo mpiaro ny zon'olombelona, ​​anisan'izany ilay mpanelanelana ny fanjakana amin'ny vahoaka Jordán Rodas, saingy mbola nanahy mikasika ny fihetsika manaraka ho ataon'ny governemanta sy ny Kongresy:
Vaovao tsara ho an'ny rafi-pitsarana Goatemalteka. Tongasoa, ny iraka Ivan Velázquez. Andeha isika hanohy ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsifisaziana aty Goatemalà. Tsy misy afa-tsy izay. Hametraka indray ny filaminam-bahoaka ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana mendrin-kaja.
Inona no mety hitranga mandritra ny 48 ora manaraka, miaraka amin'ny fiverenan'i Ivan Velasquez ho aty Goatemalà:
Politika efa hita?
Nahazo fisarihana manokana ireo tranga ireo rehefa jerena amin'ny alàlan'ny ady maharitra sy sarotra amin'ny kolikoly any Goatemalà sy ny korontana ara-politikan'ny firenena vao haingana. Narahana hetsi-bahoaka goavana dia goavana izay leo ny kolikoly sy ny tsifisaziana eo amin'ny kilasy politika izay niafara tamin'ny fialan'ny filoha Otto Pérez Molina tamin'ny taona 2015 ny fisandratam-pahefan'i Morales .
Taorian'ny krizy ara-politika tamin'ny taona 2015, nandray andraikitra lehibe ihany koa ny fisian'ny Vaomiera tamin'ny fanadihadiana ny raharaha kolikoly, nandrasana nohadihadiana akaiky ny governemantan'i Morales.
Satria voarohirohy amin'ny fanafintohinana ara-politika sy kolikoly i Morales, heverina ho fotoana manan-danja ahafahan'i Goatemala mandroso amin'ny fiarovana ny andrim-panjakana demokratika, na mety fidirana amin'ny tsirefesimandidy ny krizy ankehitriny.
Manondro ny fahasamihafana misy eo amin'i Morales “ilay mpanentana” sy i Morales “ilay filoha” ilay mpanao gazety Salvadoriana, Héctor Silva Alvalos:
Jimmy Morales no nisahana ny fiadidiana an'i Goatemalà izay notohanan'ireo vondrona nisandratra, manana rohy amin'ny fitsikilovana miaramila ny sasany amin'izy ireo. Tonga teo amin'ny [fahefana] izy, nilaza fa sady tsy mpanao kolikoly no tsy mpangalatra. Filoha iray izay manampatra ny fahefany faratampony izy ankehitriny mba hisorohana ny fanenjehana azy amin'ny kolikoly.
Mandritra izany fotoana izany, nanomboka nahazo mpanaraka indray ny tenirohy #RenunciaYa (“Mialà izao”), izay nampiasaina nandritra ny hetsi-panoherana taona 2015, raha nokarakaraina teny an-dalambe ny hetsi-panoherana. Mandritra izany, nanamafy ny maha-zava-dehibe ny fahitana ny krizin'i Goatemalà ao amin'ny faritra ny fampahalalam-baovao iraisampirenena tahaka ny gazety Kolombiana El Espectador ary nandrisika ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena mba hijery ny fivoarany:
Ankoatra ny fiovana amin'ny minitra farany, mampiseho ny fihenjanana mitranga ao amin'ny firenena sy ny kirkiry nokasihan'i Velásquez ny toe-draharaha. Misy ny ezaka tsy azo ihodivirana handevenana ny lohahevitra tsy misy fanadihadiana lalina momba izany. Izany no mahatonga ny fiarahamonina iraisampirenena tsy maintsy miara-dalana amin'ny vahoaka Goatemalteka amin'ny fiarovana ny andrim-panjakan-dry zareo sy amin'ny fikarohana ny marina. Tokony hitodika any Goatemala ny mason'izao tontolo izao satria mandalo fotoana manan-danja amin'ny tantarany ny firenena; ary mety hisy lanjany amin'ny tantaran'ny ila-bolan-tany manontolo mandalo dingana mitovy amin'izany ny vokany.